England: Kaniini yaraynaya qatarta HIV oo la siinayo bukaanka - BBC Somali
England: Kaniini yaraynaya qatarta HIV oo la siinayo bukaanka
5 Disembar 2016
Lahaanshaha sawirka SPL
Kaniini la rajeynayo in uu yareeyo in ay dadku qaadaan xanuunka HIV ayey hayadda caafimaadku ee NHS ee England bilaabeysaa in ay siiso dadka bukaanka ah.
Hayada caafimaadka ayaa ku guul dareystey dacwad ka socotey maxkamadda oo ay doonayeen in ay dowladda hoose bixiso kharashka dawadan.
Ilaa 10 000 oo ruux ayaa iminka la siinayaa dawadaas mudo saddex sanadood oo tijaabo ah. Hay'ada caafimaadka ee Ingiriisku waxay sheegtey in ay tani ka caawin doonto sidii loogu bixin lahaa si baahsan.
Pre-exposure prophylaxis ama Prep, waa kaniini la qaadanayo maalin kasta oo dilaya viruska ka hor inta aanu si buuxda u gelin jirka.
Qiimuhu qofkiiba waa £400, tijaabadan la sameeyeyna waxa lagu ogaadey in kaniinigani uu yareynayo 86% in la qaado xanuunkaas. Hay'ada caafimaadka ayaa sheegtay in uu kaniinkani u muuqdo mid waxtar leh.
Hase ahaatee, waxay sheegeen in wali loo baahan yahay in wax badan laga ogaado qaabka looga isticmaali karo England oo dhan.
Tijaabintu waa in ilaa 10 000 oo ruux lagu tijaabiyaa siddii loo ogaan lahaa qaabka dawada loo siin karo dadka ku haboon, faa'dadiisa iyo muddada ay tahay in ay qaataan.
Gudoomiyaha Waaxda HIV ee hay'ada aafimaadka England Dr Ian Williams, ayaa yiri, 'Arrintani waxay muujineysaa sidda NHS uga go'an tahay in ay maalgeliso tijaabadan iyo in la helo fursada si wanaagsan loogu diyaar garoobayo in la sameeyo tijaabo caafimaad oo baaxad weyn'.
"Xilligan, tijaabadani waxay fursad siineysaa in ay dad badan oo khatar u ah inay qaadaan xanuunkan ay ka qayb qaataan.